मुकुन्देले भनेकै सत्य साबित, राजिवलाई सेटिङमा १ करोड जिताइएको खुलासा ! (प्रमाणसहित) – Hamrosandesh.com
मुकुन्देले भनेकै सत्य साबित, राजिवलाई सेटिङमा १ करोड जिताइएको खुलासा ! (प्रमाणसहित)
को बन्छ करोपती कार्यक्रममा विराटनगरका राजीव जैनले एक करोड रुपैया जित्दै इतिहाँस लेख्न सफल भए ।
कहि कतै नसुनिएका नचिनिएका जैन आफ्नो बौद्धिकतालाई प्रयोग गरेर रातारात करोडपती बने पछि त्यसले सर्वत्र चर्चा परिचर्चा पायो जुन स्वभाविक पनि थियो ।
उनको ज्ञान र क्षमताको सबैले खुलेर प्रसंशा गरे ।
करोड बाजी मारे पछि खुसि मनाइरहेका जैनलाई अहिले भने कडा झड्का लागेको छ । समाजिक संजालहरुमा म्याच फिक्सिङ गरेर जैन लाई करोड जिताइएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
को बन्छ करोडपतीको १५ औँ अर्थात एक करोडको प्रश्नमा राजीव अलमलिएका थिए ।
२००७ सालको प्रजातन्त्र पछिको पहिलो ऐतिहासिक चुनाव कहिले घोषणा भएको थियो? भन्ने प्रश्नका अप्सनहरु वि स २०१४ माघ १९ गते ,विस २०१४ फागुन७ गते , बिस २०१४ मंसिर २१ गते र वि स २०१४ पौस २५ गते थिए ।
ती अप्सनहरुमा राजीव निकै अलमलिए पछि कार्यक्रम प्रस्तोता राजेश हमालले आरामले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ पानी खानुस भन्दै एक छिन डुल्न पनि सक्नुहूछ भनेर स्टेजमा एक फेर लगाएका थिए जुन भिडियोमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
राजेश सँग कुराकानी गर्दै स्टेजमा घुमिरहेको बेलामा नेपथ्यबाट एउटा आवाज सुनिन्छ माघ माघ भन्ने ।जुन भिडियो हेर्दा स्पष्टै सुन्न सकिन्छ ।
भिडियोको ३४ मिनेट १७ सेकण्डमा स्पष्ट सुन्न सकिन्छ राजीव र राजेश हुलीरहँदा नेपस्थ बाट स्पष्ट आवाज आएको छ । पहिला दोधार भइरहेका राजिवले जव त्यो सुने हट सिटमा बसेपछि २०१४ माघ १९ भन्ने अप्सनमै फिक्स गर्दिनुस भने र एक करोड बाजी मारे ।
अहिले त्यो नेपथ्यको आवाजलाई लिएर कार्यक्रम युनिट माथी व्यापक प्रश्नहरु उठेका छन्।
कार्यक्रम युनिटका तर्फबाट अहिले सम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक धारणा बाहिर आएको छैन । यो कुरा बाहिर आएपछि को बन्छ करोडपतिको विश्वसनियतामा व्यापक प्रश्न तेर्सिएको छ ।
कार्यक्रमले भने जस्तो टिआरपि कमाउँन नसकेपछि निर्माण युनिटले पछिल्लो समय निकै प्रोपोगाण्डा गरिरहेको थियो ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जाल मार्फत समकालिन बिषयमा दह्रो खरो टिप्पणी गर्ने एवम् मुकुन्द ल्याण्डका अभियान्ता मुकुन्द घिमिरे उर्फ मुकुन्देले को बन्छ करोडपतिको नतिजा बाहिरिएकै दिन सेटिङ्मा राजिव जैनलाई एक करोड जिताईएको भनेका थिए तर कसैले पत्याएनन् जुन कुरा अहिले विभिन्न अनलाईन समाचार पोर्टलहरुमा छ्यापछ्याप्ती आईरहेको छ ।